Home Wararka Guddiga soo xulista xubnaha aqalka sare ee Jubbaland oo la magacaabay
Guddiga soo xulista xubnaha aqalka sare ee Jubbaland oo la magacaabay
Dowlad-goboleedka Jubbaland ayaa maanta magacaabwaday xubnaha guddiga Baarlamaanka ee qabashada doorashada Aqalka sare ee doorashadoodu ka dhacayso magaaladda Kismaayo. Magacaabistaan uu Guddoonka Baarlamaanku magacaabay ayaa dabasocota codsigii shalay ay u gudbiyeen guddiga hirgalinta Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Jubbaland kaas oo ahaa in golaha wakiilada Jubbaland magacabaan guddiga Baarlamaanka u qaabilsanaan doona doorashada Aqalka sare.
War-saxaafadeedka maanta ka soo baxay guddoonka ayaa lagu sheegay, xubnaha guddiga doorashada oo ka kooban 9 waxaa haween ka ah laba, halka inta kale ay yihiin mudaneyaal rag oo ka tirsan golaha. War qoraal ah oo kasoo baxay guddiga Jubaland ayaa ugu baaqay guddoonka baarlamaanka in ay u diyaar-garoobaan xulista Senatorada kuwaas oo lagu dooran doono magaala madaxda ku meelgaarka ah ee Kimsaayo.
Musharaxiinta dooneysa in ay kamid noqdaan baarlamaanka 11aad ee soo aadan oo lacagta diiwaangelintoodu tahay 20-kun oo doolar ayay ugu baaqeen in ay si deg-deg u soo gudbiyaan codiyadooda ama araajidooda. Dowlad-goboleedka Jubaland ayay ka dalabadeen in ay ka shaqeyso ammaanka goobta doorashadda ka dhaceyso, amniga ayaa ka mid ah caqabadaha ugu culus ee horyaala doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya.